Wonke umzali ufuna ukuziqhenya ngomntanakho. Wonke umuntu ubonakala ecabanga ukuthi zonke izingane zingabantwana, futhi akhethekile, ahlukile, anamathalenta amahle. Mhlawumbe, akekho abazali emindeni enokwenza kahle abangenakufisa ingane yabo ibe yinto enhle, abazange baphuphe ukuthi uzuze okuningi kunabo ngokwabo.
Ngakho kungani abazali bengayiqondi izingane zabo? Ngempela, konke kuzoqinisekisa ukuthi abazali nezingane zihamba kahle kakhulu? Noma ukuqonda ngempela, ukulalela abazali bezingane - i-rarity?
Lo mqondo omubi - "ukuhlanganisa"
"Hlanganisa" kube yinto eyodwa, ngokusobala ukuqagela amagama nezenzo zomunye nomunye, hhayi abazali nabazali kuphela. Yilokho abashadile, izihlobo eziseduze, nalabo abahlala ngaphansi kophahla olufanayo "bakhula ndawonye". Lokhu kwenza umgomo ocacile wokuthi kungani abazali bengayiqondi izingane zabo.
Ukunakekela impilo nempilo yengane, isifiso sokumsiza, ukufunda ukuhamba kuleli zwe kuhlobene eduze nomqondo wengqondo wokuhlanganisa ".
Ukuhlangana kungumhlobo wobungane uma kungekho mingcele ebalulekile kulabo bobabili, futhi kukhona indawo yokucabanga phakathi kwabantu ababili - "unjalo, futhi unjalo."
Ezinye izibonelo ze-confluence: uthando, ukuhlonishwa ngezinga eliphakeme, amahlelo.
Ngakho-ke, usuvele uqaphele ukuthi kungani abazali bengayiqondi izingane zabo - ngoba abazi ukuthi ngabanye. Ukuzijwayeza ukucabanga ingane kusukela esemncane, uyise nomama sebekulungele "ukumcabangela," ukuthi uyothanda nokuthi kanjani izingane zizoba ngcono.
Ngezinye izikhathi kuthatha izinhlobo ezingenangqondo kakhulu - ngendlela yokukhetha ngokucophelela umyeni noma umakoti ngaphansi kwesongo sokuxoshwa emndenini, noma ukubeka umsebenzi "wokunene".
Ukulalela - akusho ukuthi "ukuzwa"
Silalela ingane yethu, ulalele izibuko zakhe - futhi okokuqala uqale ukuqagela ukuthi wayesho ukuthini. Kodwa uma ubhala kakhulu, khona-ke amacala asele azohlala engagcwaliseki.
Ukudla komndeni, uhambo lokuthutha umphakathi, ukuya esitolo, ukuvakashela udokotela, ukuvakashela ama-ejensi kahulumeni nazo zonke izinhlobo zezimo - zingaki izimo lapho udinga ukuhlangana ndawonye nokuxazulula umbuzo obalulekile! Zingaki izindawo lapho umama avela khona nezingane!
Ngakho-ke, kuzo zonke lezi zindawo baphoqeleka ukuba bahlukanise ukunakwa kwabo: ingxenye yengane, ingxenye yesikhulu noma udokotela, okuyingxenye kuye. I-Caesars yangempela, ekwazi ukwenza izinto eziyishumi ngesikhathi esisodwa - yilokho abamaMama abancane.
Izwe aliphelelanga, futhi asikwazi ukunikela sonke isikhathi sethu kumntwana ngenkathi encane futhi sidinga ukunakekelwa kwethu. Kodwa ngesikhathi esifanayo, umkhuba wokulalela ingane yakho ngesigamu, uyinakile, inganaki. " Yini ingane ehlakaniphile engayisho? "- Abazali bacabanga, baxosha ingane.
Yini izingane zethu ezikhuluma ngazo?
Eqinisweni, izingane, nakuba zikhona ezingeni elidala, kodwa ziqonde abazali. Bayakwazi ukubamba into esemqoka, hhayi ikakhulukazi ukuya emininingwaneni nasekucabangeni kwabantu abadala. Noma kunjalo, abantu abadala kaningi abanaso isikhathi sokuchaza imiqondo, izimo ngamagama alula.
Ngisho nangakhula futhi eqonda kabanzi, izingane azikwazi ukuthola ukulingana kubazali bazo. Yingakho abazali bengayiqondi izingane zabo. Kodwa nokho izingane azikwazi ukulingana nabazali bazo - le ngxenye ikulungele ngokwengqondo.
Ingane isitshela ngezifiso zayo, kodwa abazali banzima futhi bangakulungeli ukuyekethisa nge "ignorumuses" (kungakhathaliseki ukuthi bangakanani ubudala, amabili noma amabili). Yingakho abazali bengaboni izingane zabo kaningi. Ngakho-ke zonke izinhlekelele - "akahambanga lapho samtshela" futhi, ngakolunye uhlangothi, "abaqondi mina, abalaleli."
Akuzona zonke izinto ezisabekayo
Kuvela ukuthi imvelo ihlelwe ukuthi abazali bokuqala banqume konke izingane zabo, bese izingane, lapho zikhula, zisekela amalungelo abo okuzimela. Emva kwakho konke, kuthiwani, uma kungenjalo, ukuhlolwa kwabo kuhlolwe?
Emvelweni, konke kukhishwa ngokuvumelana. Futhi ubudala lapho izingane zingakwazi ukuzikhathalela ngokwabo - lokhu ngesikhathi esifanayo lapho abazali bebeka "izinduku esiteshini." Lokhu kufana nokuthi kwenzeka kanjani endle, isizukulwane esidala sikhipha amaphuphu esihlahleni , ukuze bafunde ukuhamba. Futhi ngaphandle kokuthi "ukulila", ubuhlungu bokungaboni kahle kusuka kubazali bomhlaba kuphela nababiza kakhulu - kuyadingeka.
Ukuqonda - umbandela wobudlelwane obulinganayo
Kuphela labo abazimele bangakwazi ukuqonda. Indlela ehlukile yokuphila, indlela yokuthola futhi ngokujwayelekile - hhayi "ukulethwa emlonyeni futhi inike", kodwa wonke umuntu wayithola ngokwakhe. Kuphela phakathi kwalabo "ngabanye", abantu ngabanye kuzo zonke izici bangaba nokuqonda nokuhloniphana. Futhi nabazali, kungase kuvele, futhi kuze kube sekupheleni kosuku kuzoba nobuhlobo "bunikeza imbongolo emlonyeni futhi banikeze imiyalelo ukuthi bangaphila."
Vala ubudlelwane nabantu abaseduze yiphupho elivame ukuba yinto engokoqobo. Ukondana kwegazi akusho ukusondela emoyeni. Ngakho-ke, ungathukutheli uma abantu abaningi bomdabu - abazali - bengayiqondi izingane. Zinezinhlelo ezihlukile zenani, ezinye izinqubo. Kufanele nje ube nguwe futhi ube nesibonga. Abazali - izingane, ngamathuba abasebenzisa. Futhi izingane - abazali, ngenxa nje yeqiniso lokubukeka kuleli zwe.
Indlela yokufundisa ingane ukukhuluma kahle?
Cocktail "i-Lemon Louis"
Khipha amaqanda kuma-mushroom
Ukufunda ukudansa kahle i-striptease
Ukususwa kwama-moles nge-electrocoagulation
Izimpawu nokwelashwa kwe-fibroids ye-uterine